पाँच वर्ष अगाडि स्किन ढोकाबारे ग्राहकलाई थाहा नै थिएन, अहिले माग धान्न गाह्रो छ |Nowadays Peoples know the benifit of Skin door . - Timber Craft
पाँच वर्ष अगाडि स्किन ढोकाबारे ग्राहकलाई थाहा नै थिएन, अहिले माग धान्न गाह्रो छ |Nowadays Peoples know the benifit of Skin door .
Posted at March 3, 2022
टिम्बर क्रापफ्टकाे बजार प्रतिनिधि संगकाे कुराकानीमा Timber Craft -Itahari branch का संचालक संग गरिएकाे छाेटाे ब्याबसायीक कुराकानी ।
पाँच वर्ष अगाडि स्किन ढोकाबारे ग्राहकलाई थाहा नै थिएन, अहिले माग धान्न गाह्रो छ मेरो पहिलो ग्राहकले टिम्बर क्राफ्ट ढोका पहिलो पटक घाम–पानी पर्ने ठाँउ कौशीमै लगाउनु भएको थियो रविन निरौला,
मेरो पहिलो ग्राहकले टिम्बर क्राफ्ट ढोका पहिलो पटक घाम–पानी पर्ने ठाँउ कौशीमै लगाउनु भएको थियो रविन निरौला,सञ्चालक– मामा भान्जा ट्रेडर्स
कति समय भयो ढोका व्यपारमा लाग्नु भएको ?
म करिब ४ बर्ष देखि सुनसरीको इटहरीमा ढोकाको व्यापार गर्दै आएको छु । यो भन्दा अगाडि म सेनेटिरी आइटम तथा मार्वलको व्यापार गर्थे । मैले ढोकाको सुरुवात टिम्बर क्राफ्टबाटै गरेको हुँ ।
टिम्बर क्राफ्टसँग कसरी सम्पर्क भयो ?
सुरुमा त म पार्केटबाट अगाडि बढेको हुँ । मैले पार्केटको व्यापार गर्नुपर्यो भनेर बुझदै जादा टिम्बर क्राफ्ट सँग जोडिन पुगेको हुँ । त्यो सँगै ढोका पनि लिए । म अध्ययन गरेर मात्र कुनै काम गर्ने भएकोले मैले सबै बुझें यो कम्पनीको ढोका बेच्न सक्छु भन्ने लागेर नै डिलरको लागि आँटेको हुँ ।
कस्तो छ, बजार तथा ग्राहकको माग ?
पहिला पहिला स्किन डोर के हो भन्ने कसैलाई थाहा नै थिएन, खास विक्रि हुदैनथ्यो । त्यति बेला बजार बनाउन हामी हरेक ग्राहकको ढोका ढोकामा गयौं । सवैलाई जानकारी गरायौं, सवैलाई कन्भिन्स गरायौं । ढोकाको व्यापार गर्नुभन्दा अगाडि मैले केहि साथी सर्कल बनाएको थिएँ । मेरो बोलेको फेल नखाने सर्कल थियो । त्यसकारण पनि खासै अप्ठ्यारो भएन । ग्राहक धेरै किसिमका हुन्छन, उहाँहरुलाई बुझाउन सक्नु, उहाँको मन जित्न सक्नु आफ्नो खुबि हो । प्लाइको ढोका लिन आउनेले टिम्बर क्राफ्टको स्किन ढोका लिएर गएका पनि कतिपयले प्लाइको नै लगेका हुन्छन । टिम्बर क्राफ्टका ढोकाको माग गर्ने ग्राहक बुझेका नै हुन्छन । विदेश बस्ने कोहि आफन्त छन, भने उनीहरुले भनेको भनेर ढोका खोज्दै आउने ग्राहक पनि छन । हाम्रो ढोकाको विज्ञापन विदेशमा बस्ने दाजु भाईहरुले समेत गरिदिनुभएको छ । एउटा घरमा हाम्रो ढोका लगाएमा उहाँहरुले नै हाम्रो विज्ञापन गरिदिनुहुन्छ । ग्राहक फेरि फेरि आउछन ।
तपाईको पहिलो ग्राहको सम्झना छ ?
सुरुमा एउटा ढोका अभियान चलाएका थियौं । एउटा ढोका लगाउनु राम्रो भए फेरि लाउनु भनेर कन्भिन्स गराएर बेचेको थिए । पहिलो चोटि ढोका किन्ने ग्राहकले पानी पर्ने ठाँउ कौशीमै लगाउनु भएको थियो । उहाँले अरुलाई भन्नुभयो एकपछि अर्को गर्दै जानकारी हुदैगएपछि अहिले बजार त निकै राम्रो भएको छ । अहिले मेरो संयोजनबाट ४० भन्दा बढि पसल (सव–डिलर)ले टिम्बर क्राफ्टको ढोका बेच्छन । अहिले हामीले माग धन्न सकेका छैनौं ।
ढोका औसत विक्रि कति छ ?
ढोका नियमित दिन दिनै विक्रि हुने बस्तु होइन । यसरि औसतमा भन्नु पर्दा मासिक ४ सय देखी ५०० काे हाराहारीमा ढोकाहरु विक्रि भइरहेको छ । लकडाउन भए नभए पनि ढोका किन्ने मानिसको कमि छैन । हामीले माग पुर्याउन सकेको अवस्था छैन ।
टिम्बर क्राफ्ट कम्पनीले दिने सेवा सुविधा पाइराख्नु भएको छ ? खुसि हुनुहुन्छ ?
व्यापार भनेको सहकार्यमा हुने कुरा हो । कम्पनी सँग म पनि खुसि छु । कम्पनी पनि खुसी छ । सम्बन्ध हुनुपर्छ । व्यापार भनेको नाफाको लागि नै गर्ने हो ।
टिम्बर क्राफ्टका ढोकाहरुमा गुनासो कतिको आउछ ?
सवै शतपूतिशत ग्राहक सन्तुष्टि नै हुन्छन भन्ने छैन । हामीले भएको सवै कुरा भन्दिनु पर्छ । ग्राहकले खास गुनासो आउदैन । कम्पनीले ढोका दिन नसक्दा अलि असहज चाँहि हुने गरेको छ ।
तपाईले के पढ्नु भएको छ, कसरी ढोका व्यापारमा लाग्नु भयो ?
म पढ्दा पढदै व्यापारमा छिरेको हुँ । पढ्दा पढदै विदेश जाने भुत चढ्यो, अष्ट्रेलिया (Australia) जान खोजे स्टुडेन्ट भिषा (Student Visa) भन्दा अर्कै तरिकाबाट जान खोज्दा असफल भइयो । फिर्ता घर फर्किए । फर्किएपछि के गर्ने कसो गर्ने भयो ? सवैसँग सल्लाह गर्दा पसल गर्ने कुरा भयो । अनि म यता तिर लागे । सुरुमा यहाँ जालि को पसल थियो । मैले ५ लाख बाट व्यापार गरेको हुँ । म व्यापार भन्दा पनि साथीभाई कमाएको छु । साथी भाई छन् भने व्यापारमा सहयोग नै हुन्छ । मेरो घर परिवार खुसि हुनुहुन्छ । अहिले मेरोमा चार जनाले रोजगारी पाउनु भएको छ । अन्तमा मानिसले जीवनमा प्राय एकपल्ट मात्रै घर बनाउछ । कसैले धेरै पनि बनाउला । घर बनाउदा सवैकुरा बुझेर सामाग्री प्रयोग गर्नु वेश हुन्छ ।